मेरो अधुरो माया- सुरज खड्का क्षेत्री। - Ek Jamarko
Home / कथा / मेरो अधुरो माया- सुरज खड्का क्षेत्री।
मेरो अधुरो माया- सुरज खड्का क्षेत्री।
ठ्याक्कै मिति याद छैन ! याद होस पनि कसरी ! त्यस्ता फेसबुकमा रिक्वेस्ट मैले कति जनालाई पठाउथे ! त्यही अनुसार उनलाइ पनि पुगेछ ! (उनी अर्थात अधुरो माया) एक दिन एसेप्ट गरिन ! अब केटाले पठाको रिक्वेस्ट केटिले एसेप्ट गर्दा कुन चाहिँ केटा खुशी नहोला ! त्यो खुशी ले मलाई पनि छोडेन !
हामी फेसबुकमा एक आपसमा साथी भयौं ! साथी त भैयो तर आधार बिहिन किन भने अहिले पनि म सङ्ग भएका धेरै साथिहरु सङ्ग मेरो कुरा हुदैन ! हामी कुरा नगर्ने फेसबुक साथी धेरै छौ ! एकआपसमा चिनजान र कुरा नभए पछि त्यसलाई कुन आधार मान्ने ? यो नियम उनमा लागु होस भन्ने मेरो चाहाना थिएन ! नचिनेका केटालाई सायद केटिले बोलाउदैनन होला ! त्यो तिनीहरु को घमण्ड मान्ने वा स्वभाव मान्ने त्यो मलाई थाहा छैन ! हो त्यही कुरा मेरो उनिमा पनि लागू भयो !
उनले बोलाइनन भनेर मैले पनी नबोलाउन त भएन ! अब साथिलाइ मुर्तरुप दिन म लागि परे ! सुरु त मैले नै गर्नु छ ! सुरु गर्न पनि म सङ्ग कुनै नौलो शब्द पनि छैन ! त्यही हेलो हाइ नै हो ! त्यही हेलो हाइ बाट सुरु भएको हाम्रो कुराकानी फोन नम्बर लिने दिने सम्म पुग्यो ! कुरो बुझ्नु होस हाम्रो माया बस्यो ! माया बसे पछि धेरै कुरा साटासाट गर्नु पर्छ मनका कुरा खोलेर भन्नू पर्छ भन्ने मेरो चाहना हो ! तर उनले हरेक कुरा गोप्य राख्न खोजिन !
यहाँ सम्म कि मैले उनको फेसबुकका स्टाटस र फोटोमा लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नपाउने त्यो मलाई ठिक लागेन ! थोरै भनाभन भएको हो ! त्यो सिवाय अरु केही भएको थिएन ! तर आज उनको फोन नम्बर चालू छैन ! यता बाट मैले गर्दा लाग्दैन ! उनी त ठुली मान्छे किन फोन गर्थिन ! फेसबुकमा म्यासेज ५० वटा पठाए होला एउटा पनि रिप्लाई छैन ! जिन्दगीमा फेसबुकका केटिको बिश्वास गर्दैन भनेर कसम खाएको छु ! घरकाले जुन ठाउकी केटि बिबाह गर भने पनि गर्न राजी हुने सङ्कल्प गरेको छु ! यहि होला फेसबुकको अधुरो माया भन्ने भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छु !
#सुरज खड्का क्षेत्री।
मेरो अधुरो माया- सुरज खड्का क्षेत्री। Reviewed by Jamarko TV on जनवरी 27, 2016 Rating: 5